Maxay Tahay Inay Meheraddaadu Noqoto Mid Bulsho | Martech Zone
Wax qarsoodi ah maahan in suuqgeynta baraha bulshada ay meel walba taal. Waxaan ku aragnaa astaamaha caanka ah ee Twitter iyo Facebook shaashadahayada TV-yada iyo emaylladayada. Waxaan ka aqrinay internetka iyo joornaalka.
Si ka duwan noocyada kale ee dhaqameed ee suuqgeynta, suuqgeynta warbaahinta bulshada ayaa ah mid ay u heli karaan milkiilayaasha ganacsiyada yar yar sida ay tahay Shirkadaha Fortune 500. Dadku at Wix waxay diyaariyeen sawir muuqaal ah oo muujinaya saameynta ay baraha bulshada ku leeyihiin ganacsigaaga. Waa kuwan waxyaabaha muhiimka ah:
80% dadka Mareykanka ah ama 245 milyan oo qof ayaa adeegsada kireysiga hal shabakad bulsho. Tweet Tani
53% dadka ku firfircoon shabakadaha bulshada waxay raacaan ugu yaraan hal sumad. Tweet Tani
48% ganacsiyada yaryar iyo ganacsatada waxay kor u qaadeen iibka iyagoo adeegsanaya baraha bulshada. Tweet Tani
58% ganacsiyada yaryar ayaa hoos u dhigay qiimaha suuqgeynta iyagoo adeegsanaya warbaahinta bulshada. Tweet Tani
Dadka isticmaala Facebook waxay wadaagaan 4 bilyan oo shey maalin kasta. Tweet Tani
Tags: Facebookinfographicsuuq-geynta suuqaMedia Social Suuqsababtamaxaa bulsho u ahmaxaa suuqgeynta bulshadamaxaa baraha bulshadamaxaa suuqgeynta warbaahinta bulshadamaxay tahay sababta ay meheraddaadu u noqonayso mid bulsheedmaxay tahay sababta meheraddaadu u noqon lahayd mid bulsheedwix
Andrew K Kirk waa Aasaasaha Face The Buzz, kaas oo ka caawiya milkiilayaasha ganacsiyada yar yar inay ka faa’iideystaan ​​awoodda suuqgeynta internetka. Macaamiishiisa hadda waxay ururiyeen lacag ka badan $ 3.5 milyan oo maalgelin ah. Wuxuu bixiyaa tiro kooban oo ah qiimeyn suuq-geyn oo bilaash ah.
Aragti ka Baxsan: Ku wad Wadista taraafikada Talooyin Talooyin
Jul 3, 2012 markay tahay 6:26 PM
Waad ku mahadsan tahay dhammaan kooxda Suuqgeynta Teknolojiyada Suuq geynta; waa qarax in aan dhammaantiin la shaqeeyo. Waxaan rajeynayaa qoraallo badan oo dheeri ah.
Jul 3, 2012 markay tahay 6:34 PM
Faahfaahin weyn. Waan ka helay qaabka ay tahay. Shaqada wanaagsan kor u qaad.
Jul 3, 2012 markay tahay 10:06 PM
@nelsonta: disqus, Waad ku mahadsantahay ereyada wanaagsan!
Jul 3, 2012 markay tahay 6:48 PM
Cajiib. Warbaahinta bulshada ayaa sii kordheysa maalin kasta. Waxaan la yaabanahay haddii xumbada koritaanka waligeed qarxin doonto.
Jul 3, 2012 markay tahay 10:08 PM
@ twitter-100637060: disqus, waxaad soo qaadatay qodob weyn oo dood ah. Si kastaba ha noqotee, uma maleynayo inay tahay mid, laakiin waa goorma. Dhammaan teknolojiyadaha waaweyn iyo isbeddellada ayaa laga dhaafayaa kuwa soo socda "uguna dambeeyay". Su’aashu waxay tahay goorma ayey dhacaysaa?
Jul 3, 2012 markay tahay 8:13 PM
Anigu kuma raaci kari waayey wax intaa ka badan oo ku saabsan sawir-gacmeedkan sababta ay ganacsiyada u noqonayaan kuwo bulsheed. Kaliya maahan isbeddel socda. Warbaahinta bulshada ayaa halkaan lagu joogayaa. Marka laga soo tago fursado badan oo aad kula macaamili karto dhagaystayaal aad u tiro badan, waxay siisaa beddel aan qaali ahayn oo ku saabsan howlaha suuq-geynta dhaqanka.
Jul 3, 2012 markay tahay 10:11 PM
@ twitter-302771660: disqus Waad ku mahadsantahay faalladaada iyo xamaasadaada! Ahaanshaha beddelka qaaliga ah ee suuqgeynta dhaqameed waxay ka dhigeysaa warbaahinta bulshada xuduud cusub oo suuqgeyn ah. Meeshii hore shirkadaha badankood, gaar ahaan ganacsiyada yaryar, waligood kama qeyb geli lahaayeen TV-yada ama xayeysiinta raadiyaha, warbaahinta bulshada iyo baloogyada waa goob lagu ciyaaro.
Agoosto 1, 2012 saacaddu markay ahayd 8:31 PM
Mahadsanid Andrew! Si run!
Warbaahinta bulshada wax badan ayaa laga helaa. Ogow khiyaamada oo sii wad ka qaybgal iyo wadida xiisaha si aad u gaarto natiijooyinkaaga la beegsaday. Dhammaan dadaallada waxaa lagu bixiyaa waqtiga. Dulqaad yeelo 🙂
Agoosto 1, 2012 saacaddu markay ahayd 8:47 PM